I-Twitter iya kongeza 'Gcina okwenziwayo kamva' Iindaba zeGajethi
URuben inyongo | | I intanethi
I-Twitter iyaqhubeka nokuzivuselela kwaye yongeza amanqaku amatsha kwinethiwekhi yoluntu. Yazi ntoni Amanye amaqonga anjenge-Instagram ayafumana umhlaba. Kwaye oku kubangela intshukumo ngaphakathi kwenkampani. Iimpawu ezili-140 zizinto zexesha elidlulileyo. Kutshanje lo mda uphakanyisiwe wangama-280; Oko kukuthi, kabini.
Nangona kunjalo, oku akupheleli apha. Kwaye njengoko kubhengeziwe ngeakhawunti yakhe ye-Twitter, Umphathi weMveliso yeTwitter uyakuqinisekisa ukuba kwezi veki zidlulileyo bebesebenza nabaphuhlisi. Umsebenzi "ofundelwe ixesha elizayo" kudala ukhona kwi-Net, ngakumbi phantsi kwezicelo ezithandwayo ezinje nge "Pocket".
Ngoku emva ukwehla okubalulekileyo kwimpahla yomsebenzisi ukuba inkampani iyasokola, ngeliqhosha elitsha "lokugcina kamva" umsebenzisi uya kuba nakho ukuhlala ixesha elide esebenza kwinethiwekhi yoluntu. Kwelinye icala, uManejala weMveliso ngokwakhe ubonakalise amanqaku anomdla walo msebenzi mtsha.
Okokuqala, Iindaba ezizayo ze-Twitter aziyi kuchazwa ngokupheleleyo; Njengangoku nje umda wakho wexesha lonke uboniswa ukuba uyayithanda i-tweet okanye awuyithandi, kule meko akukho mntu uya kwazi- nditsho nomyili walo myalezo-ukuba uwugcinile ukuze uwufunde kamva. Kwakhona, nganye i-tweet ethunyelweyo iya kuba nokhetho lokugcina. Kwaye isicelo semveli se-Twitter siza kunika imenyu apho unokuqokelela khona yonke le miyalezo ukuze uyifunde kamva.
Ngoku, okwangoku akukho mhla wokukhutshwa ngqo. Kodwa emva kokunikezelwa kwamazwi asemthethweni ngaphakathi kwenkampani, asicingi ukuba baya kuthatha ixesha elide. Kwakhona, lo msebenzi "Wokugcina kamva" ingaluncedo xa imiyalezo ihamba kunye namakhonkco ezifuna ukufundwa ngokuzonwabisa ngakumbi, kunye nokukwazi ukugcina imifanekiso eneakhawunti enomdla enegalelo kwinethiwekhi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I intanethi » I-Twitter iya kongeza 'Gcina okwamva'